Fitsaboana any La Reunion – Mety hody amin’ny volana jona ny kolonely Andrianasoavina - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fitsaboana any La Reunion – Mety hody amin’ny volana jona ny kolonely Andrianasoavina
Ny 15 mey teo no nivoaka ny hopitaly La Belle Pierre ao La Réunion ny lietnà-kolonely Andrianasoavina Charles. 45 andro ny fotoana hakany aina taorian’ny fitsaboana azy araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Milaza ireo havany fa « tsy maintsy mody izy aorian’izay ». Milaza ho tsy mahalala izany kosa ny avy eo anivon’ny Fitsarana sy ny Foloalindahy.
Tapitra ny volana jona izao anefa ny fotoana fakana aina nomen’ny mpitsabo azy, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Aorian’izay dia tokony hihazo an’i Madagasikara izy.
« Tsy maintsy mody ny tenany rehefa tapitra io fe-potoana io satria na ny fahazoan-dalana ipetrahany any La Réunion ihany koa aza dia tapitra manaraka izany. Miankina amin’ny mpitondra noho izany ny fampodiana azy, fa izahay fianakaviany kosa efa miomana amin’ny fodiany », hoy ny avy amin’ny fianakavian’ity manamboninahitra ity.
« Raha ny fahafantarako azy dia mandroso mihatsara ny fahasalaman’io manamboninahitra io. Olona voatana am-ponja izy raha ny toerana misy azy eto Madagasikara. Anjaran’ny Fitsarana araka izany no manapaka ny momba azy », hoy kosa ny jeneraly Rakotoarimasy André Lucien, minisitry ny Foloalindahy.
Ny minisitry ny Fitsarana, Razanamahasoa Christine anefa dia milaza ho « tsy mbola naheno ny mahakasika ny fampodiana azy ». Nanamafy kosa anefa ity farany fa « efa salama tsara izy ».
Voaheloka hiasa an-terivozona mandra-pahafaty ny lietnà-kolonely Andrianasoavina Charles noho ny raharaha fikasana hanongam-panjakana teny amin’ny Bani Ivato, ny 17 novambra 2010. Nalefa notsaboina any La Réunion izy ny desambra 2011 rehefa avy notanana am-ponja teny Tsiafahy.
Faralala 0 Fanehoan-kevitra	Lahatsoratra hafaMiverena @ pejy fandraisana
Fitsaboana, Mpanoratra Rijakely, 30.05.2012, 08:13	FIARAHAMONINA